KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Xhosa Zulu
“TORƆM yɛ aboa a wohwɛ no a, ne ho yɛ hu na ne ho nyɛ fɛ. Dɛn nti na ne mmati woware na ne ti nso ware saa?” Ɛnyɛ afeha a ɛto so 19 nhoma kyerɛwfo Henry David Thoreau nkutoo na ɔkaa torɔm ho asɛm saa. Esiane sɛ ɔyɛ omumɔ na nnipa kakraa bi na ahu no pɛn nti, nnipa pii susuw sɛ ɔyɛ nyaa na onnim nyansa. So ɛyɛ nokware? Nhwehwɛmufo a wɔwɔ Amerika Atifi fam, Europa ne Asia no abehu aboa soronko yi ho nokwasɛm pii.
Obiara gye tom sɛ torɔm yɛ aboa kɛse. Ɛwom sɛ “kwae mu aboa kɛse” yi wɔ anan atenten a ɛma ɔyɛ kuntann de, nanso sɛ sakraman kuw tu ba ne so a, ɛno na ɛboa no ma ɔpam wɔn. Sɛ wɔwo torɔm a, nna kakraa bi akyi no na wasua asuguare, na wɔahyɛ no nsow sɛ otumi boro asu akwansin pii, na otumi dɔ asukɔ kɔ nsu ase bɛyɛ anammɔn 20 kɔwe afifide!
Aboa ko: Tɔteboa
Aduan a Odi: Nnua ho mfefɛwee, nhabamma, nwura a efifi wɔ nsu mu
N’ammirikatu: Dɔnhwerew biara otumi tu mmirika kilomita 55
Ne tenten: Efi ne nan ase kosi ne mmati yɛ mita 1.5 kosi 2
Ne mu duru: Ne mu duru tumi du kilogram 816
Torɔm tumi dannan n’aniwa, na sɛ wannan ne ti mpo a, otumi hu nea ɛrekɔ so wɔ n’akyi. Ne hwene nso boa no paa. Nhwehwɛmufo bi kyerɛ sɛ, esiane sɛ ɔkwan a ɛda ne hwene ntokuru abien ntam ware nti, otumi te ade a ɛwɔ akyirikyiri ho hua ma ohu baabi a ɛwɔ. Torɔm aso nso di boa no yiye. Otumi dannan n’aso no kyerɛ baabiara, na etumi te torɔm afoforo a wɔwɔ akyirikyiri bɛyɛ kilomita 3 mpo nka!
Sɛnea ɔkyerɛwfo bi kae no, “torɔm mma ho yɛ fɛ,” wɔpɛ asɛm na hwee mfa wɔn ho. Sɛ torɔm wo a, wɔhwɛ wɔn mma yiye na wɔbɔ wɔn ho ban. Sɛ mpataku, asisi, anaa nnipa mpo pɛ sɛ wɔkyere wɔn mma a, wotumi ko gye wɔn. Bere a torɔm ba bedi bɛyɛ afe no, na ne maame anyinsɛn n’akyi foforo. Sɛ ɛba saa a, ɛna no de anibere pam no ma n’ankasa kɔbɔ ne bra.
WOTUMI GYINA AWƆW ANO
Esiane sɛ torɔm di afifide nkutoo nti, wɔyɛ dɛn twa awɔwbere? Ade biako ne sɛ, edu ɔhyew bere a, wodidi pii. Torɔm tumi we nwura a emu duru yɛ kilogram 23 da biara. Na otumi we nwura a ɛwɔ asase so anaa nsu ase a ne tenten bɛyɛ mita 3. Torɔm didi a, ɔde sie ne yafunu kotoku a emu akyɛ anan no mu, na ɔtwe mu nneɛma pa ma ɔdɔ srade. Nanso, edu awɔwbere a, torɔm hyia asiane afoforo.
Sɛ awɔw no ano yɛ den na sukyerɛmma tɔ pii a, ɛma torɔm ho kyere no paa. Sɛ edu awɔwbere a, onkyinkyin pii, sɛnea ɛbɛyɛ a ne ho nhwi a emu yɛ duru no bɛma watumi ako awɔw no. Sɛ sukyerɛmma retɔ a, ɛnyɛ den koraa sɛ sakraman bɛkyere wɔn. Nanso mpɛn pii no, nnipa na ɛyɛ asiane kɛse ma wɔn, titiriw abɔmmɔfo ne afirikafo.
Torɔm taa pɛ nkyene a wɔde gugu karkwan so sɛ ɛnan asukɔtweaa no. Nanso esiane sɛ wɔn ho nhwi ani dum na wɔtaa twa karkwan mu bere a ade resa nti, afirikafo ntaa nhu wɔn ntɛm ma enti wɔde kar bɔ wɔn. Eyi ma atorɔm ne nnipa nyinaa hwere wɔn nkwa.
ABOA A ƆPƐ AGORU
Torɔm nim asuguare yiye paa. Otumi guare po ne asuten nyinaa. Edu bere a ɛsɛ sɛ mmarima no foro mmea no a, wɔbom yɛ nneɛma, na sɛ wɔwo nso a, wɔhwɛ wɔn mma ma ɛyɛ fɛ. Sɛ wɔkyere torɔm mma ba fie a, wotumi ne nnipa nya abusuabɔ te sɛ wɔn maame. Ɔbenfo Valerius Geist ka sɛ: “Aboa a n’anim nyɛ fɛ yi ani atew, ne ho yɛ anika, na otumi ne nnipa fa adamfo a emu yɛ den.”
Torɔm mma pɛ asɛm na hwee mfa wɔn ho
Nanso ɛsɛ sɛ yɛyɛ ahwɛyiye: Torɔm yɛ wuram aboa a ne ho yɛ den paa. Sɛ wuhyia bi wɔ wuram a, ɛnsɛ sɛ wobɛn no pii, titiriw bere a ne mma wɔ ne nkyɛn no. Nanso nya awerɛhyem sɛ, sɛ kwae mu ɔbran soronko yi wɔ akyiri mpo na wuhu no a, wo ho betumi adwiriw wo.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan NYAN! March 2013 | Sɛnea Wubetumi Ayɛ Agya Pa